ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှ…အမှတ်တရ ရဲဘော်ငွေ – ဖိုးနီ / လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
အမှတ်တရ ရဲဘော်ငွေ – ဖိုးနီ
“ ကျမ အသက်ဆက်ရှင်နေချင်သေးတယ်…
ကျမလုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်…” ဆိုသော ရဲဘော်ငွေကို
သံမဏိလိပ်ပြာနှင့် လျှပ်တပြက်
၁၉၇၈-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၏ တခုသောနေ့ က…… ပန်ဆန်းရှိ ပါတီဗဟိုတွင် ရဲဘော်ငွေနှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ရောက်ခဲ့သည်မှာ ရက်တချို့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ထိုကာလက… ကျွန်တော့်အဖို့ ပန်ဆန်းဒေသ၏ အေးစက်သော ဆောင်းနှင်းပွင့်များနှင့် အသားမကျနိုင်… သူစိမ်းဆန်နေခဲ့ပါသည်။
အောက်ဖက် ဝေးလံသော ပြောက်ကျားဒေသမှ ဆက်သားတာဝန်ဖြင့် ခေတ္တရောက်နေရသည့် အခြေအနေဖြစ်သဖြင့် တာဝန်အရ ခပ်လျှိုလျှိုလေးသာ နေရသည့်အခြေအနေ…….. သို့ရာတွင် မရောက်ဘူးသည့် ဒေသ၊ မကြုံဘူးသည့် မြင်ကွင်းများဖြစ်သဖြင့် တချို့ကို မရဲတရဲ စပ်စုမိသည်တော့ ရှိပါသည်။ တာဝန်ခံရဲဘော်ကလည်း အလိုက်သိစွာ ပြောပြသင့်သည်ဟု ယူဆသောအခြေအနေတချို့ကို အခါအားလျော်စွာ မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။
တ နေ့……မမျှော်လင့်ဘဲ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရှမ်းနီ အမျိုးသားရဲဘော်များက ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံသောပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်ကလေးကိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ပွဲတွင် အရင်ရောက်နေနှင့်သော ရဲဘော်ဦးတင်၊ ရဲဘော်လှကျော်ဇောနှင့် ရဲဘော်တချို့က အသစ်ဝင်လာသူကို လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ကြသည်။
“ဆရာမကြီး လာ လာ”
အနည်းငယ်ထူးခြားသလို ခံစားမိသဖြင့် အပြင်ဘက်သို့ တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။
ယူ နီဖောင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် ကြယ်နီဦးထုပ် ဆောင်းထားသော အသက်လေးဆယ်ကျော်လောက်ရှိသည့် ရဲဘော်မကြီးတယောက် သိမ်မွေ့ညင်သာစွာ တလှမ်းချင်း လှမ်းလျက် ဝင်လာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဤတဒင်္ဂ ကာလလေးမှာပင် ….သူ့မျက်နှာပေါ်မှ လှိုက်လှဲဖြူစင်သော အပြုံးရိပ်တို့ကို သတိထားလိုက်မိသည်။
“ အဲ့ဒီ ရဲဘော်ပဲလေ…ခင်ဗျားတွေ့ဖူးချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဟို သီချင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီး….. နာမည်က ရဲဘော်ငွေ..တဲ့ ”
“ အော် …..”
အထင်နှင့်အမြင် တော်တော်လေး ကွာဟသွားသဖြင့် အံ့သြသွားမိသည်။ ၄၉-ခုနှစ်ကတည်းက တော်လှန်ရေးထဲပါ လာတဲ့ အမျိုးသမီး ရဲဘော်ဟောင်းကြီး ဆိုပါလား…ရိုးမအသွယ်သွယ်ကို ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းလာခဲ့သော သံမဏိလိပ်ပြာ.….။
ရုတ်ချည်း ဆိုသလို ရခိုင်ရိုးမရှိ ပြည်နယ်တပ်မှူးကြီး ရဲဘော်ထွန်းလှအောင် ပြောဖူးသောစကားကို ပြန်လည်ကြားယောင်လာမိသည်။
“ ဒီသီချင်းဆိုတဲ့ ကလေးမက အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အသံကောင်းတာပဲ…ကောင်မလေးက ရှိလှမှ ဆယ့်သုံးလေးနှစ်ပေါ့….၊ ဗဟိုက လူကြီးတွေကလည်းကွာ ဒီလောက် ငယ်ငယ်လေးကိုမှ သီချင်းဆိုခိုင်းရတယ်လို့ …..”
ယင်းကာလက ပြည်သူ့အသံ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ချက်မှာ မကြာခဏလာနေသော
<<မောင် တို့ရွာမှာလေ ဘာတွေပေါပါလိမ့် xx>> အစချီသည့် ကျေးလက် သံစဉ်နှင့်သီဆိုထားသော ပြည်သူ့ဘဝသရုပ်ဖေါ် တော်လှန်ရေး တေးသီချင်းကို နားထောင်ရင်းဖြင့် မှတ်ချက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်…..။
နောင်တွင်….ကျွန်တော် ပါတီဗဟိုမှ ရခိုင်ဘက်သို့ပြန်ရောက်ချိန် သီချင်းဆိုသူ ရဲဘော်အမျိုးသမီးကြီးနှင့်ဆုံခဲ့သည့်အဖြစ်ကို ပြန်ပြောပြတော့ တပ်မှူးကြီးက မျက်ရည်ထွက်အောင်ပင် ရယ်ရှာသည်။
“ မှန်းထားတာနဲ့ တော်တော်ကို လွဲသွားတာကိုး ” ဟုလည်း ဆိုသည်။
ရဲဘော်ငွေနှင့်ကျွန်တော်၏ ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုက ဤမျှသာဖြစ်သည်။ တဦးနှင့်တဦး ရင်းရင်းနှီးနှီး မိတ်ဆက်ခွင့် မရခဲ့သော်လည်း သူ့မျက်နှာပေါ်မှ ဝင်းပသော အပြုံးပန်းတပွင့်ကိုတော့ အမှတ်တရရှိနေခဲ့သည်။ ရင်ထဲမှာ ထာဝရ ကိန်းအောင်းနေခဲ့သော လူတန်းစား ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မစိတ်ဓာတ် သို့မဟုတ် မေတ္တာတရား.. ရိုးသားဖြူစင်မှုတို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပြသော သူ၏ ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတပင်ဖြစ်မည်။
ကျွန်တော်ကတော့ စံပယ်ပန်းလေးလို ဖြူစင်မွှေးမြသော သူ့အပြုံးကို“ စံပယ်ဖြူအပြုံး” ဟုသာ တင်စားလိုက်ခဲ့မိသည်။ ထိုအချိန်က ခဏတာမျှ —-လျှပ်တပြက် တွေဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဆယ်နှစ်ကျော်မျှ တယောက်တနေရာ..ဝေးကွာခဲ့ကြသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင်မှ ရေစက်မကုန် ပြန်ဆုံခဲ့ကြပြန်သည်။ ဤအကြိမ်မှာတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှင့် ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်တစု အသိုက်တခုထည်း ဝပ်ကျင်းတခုထည်းမှာ အတူတကွလက်တွဲပြီး သေလောက်သည့်ဒဏ်ရာဖြင့် လဲလျောင်းနေခဲ့ရသော မိခင်ပါတီ ပြန်လည်ရှင်သန်လာရေးအတွက် ကျားကုတ်ကျားခဲ လုံးပန်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြသည်။ ၂ဝ၁၄-ခုနှစ် မတ်လ(၈)ရက်နေ့ သူ ကွယ်လွန်သွားချိန်ထိ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလတိုင် ကန္တာရနှစ်များကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြသည်။
အရုဏ်ဦး ခရီးသည်နှင့် အနှစ် (၂၀)
၁၉၈၉-ခုနှစ်…ပါတီဗဟို၏ ဆုံးရှုံးမှုက ကြီးမားလွန်းသည်၊ အခြေခံဒေသ….တပ်…..အားလုံး အချိန်တိုအတွင်းမှာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည်။ အခြေအနေ၏ တောင်းဆိုမှုအရ မလွှဲမရှောင်သာ အသက်အရွယ်အိုမင်းပြီဖြစ်သော ဗဟိုခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အနားယူဘို့ စီစဉ်ရသည်။
ပါတီအလံကို ဆက်လွှင့်ဖို့ အနည်းစု ရဲဘော်တချို့သာ ကျန်တော့သည်။ မိတ်ဆွေဆိုသူများလည်း တဖြေးဖြေး ဝေးသွားကြသည်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မည့်သူ မရှိ၊ အဘက်လုပ်မည့်သူမရှိ… ပင်စည် အကိုင်းအခက် အရွက်အသီးအပွင့် …ဘာတခုမျှ မရှိတော့….ပထဝီမြေသားကို ရှိသည့်အားနှင့် ကုပ်ခြစ်ဆွဲကိုင်ထားသော အမြစ်တချို့သာ ဒဏ်ရာဖြင့်ကျန်ရစ်သည်။
အခြေအနေဟန်ပုံမရသဖြင့် တချို့ (အတော်များများ) လည်း နည်းမျိုးစုံဖြင့်လစ်ကုန်သည်။ ရဲဘော်ငွေ နှင့်ဤအကြောင်းစကားစပ်မိတော့ သူကတော့ထုံးစံအတိုင်း ပြုံးပြုံးလေးနှင့်ပြောလာသည်။
“ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး…ရဲဘော်ထွန်း ပြောတာလေး ကျမသဘောကျတယ်။ မြစ်လယ်ခေါင်မှာ လှေကြီးတစင်း မြုပ်တော့မည့်အရိပ်အရောင်ပေါ်တော့ လှေပေါ်ကကြွက်တွေ အလုအယက် ရေထဲခုန်ဆင်းကြသလိုပေါ့…တဲ့ ”
သူ နှင့်အနီးကပ်နေလာရချိန်တွင် သူ၏ လေးစားအတုယူဘွယ်ကောင်းသော အတွေးအခေါ်နှင့်လုပ်ဟန်များကို တွေ့လာရသည်။ ဘဝတလျှောက်လုံး ရိုးရှင်းသောနေထိုင်မှုဘဝဖြင့် ဖြတ်သန်းလာသူတယောက်၏ ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် အဆင်းရဲအပင်ပန်းခံသော လုပ်ဟန်ကို သူ…ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ခက်ထန်ကြမ်းတန်းသော ဘဝခရီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူ ဖြစ်သော်လည်း …သူ၏ စိတ်ထားနှိမ့်ချမှု ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု တို့ကတော့ တွေ့ရသူတိုင်း အံသြလက်ဖျားခါလောက်ပါသည်။
ကြီးငယ်မရွေး လူတိုင်းကို စကားပြောလျှင် သူ့ကိုယ်သူ “ကျမ”ဟူသော နာမ်စားကို သုံးလေ့ရှိသည်။ ရဲဘော်အချင်းချင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် သူက လူတန်းစား ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မစိတ်ဓာတ် အရင်းခံပြီး အကောင်းမြင် ဝါဒဖြင့်သာချဉ်းကပ် ရှုမြင် ဆက်ဆံလေ့ရှိသည်။
၁၉၄၉-ခုနှစ်က … လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးထဲ စတင်ပါဝင်လာပြီး နောက်ပိုင်း(၅၁-ခုနှစ်)တွင် ပါတီဗဟို၏ ပြည်သူ့သဘင်အဖွဲ့တွင် တာဝန်ပေးခံရသည်။ တော်လှန်ရေး၏ ဝါဒဖြန့်ချိရေးတာဝန်အဖြစ် သ ဘောထားပြီး မလွှဲမရှောင်သာ စင်ပေါ်တက်ခဲ့ရသော်လည်း သူက ထင်ပေါ်ချင် သူတယောက်တော့ မဟုတ်ပေ။ သူ့စိတ်ဓာတ်အရင်းခံက သမိုင်းလိုအပ်ချက်အရ စင်ပေါ်တက်ဖို့ လိုအပ်သူတွေအတွက် စင်ကို ထမ်းပိုးထား ချင်သူသာဖြစ်သည်။ မိမိ ကိုယ်ကို ဂုဏ်ဖော်ပြောတာမျိုး လုပ်လေ့မရှိပေ။
သူ့သမိုင်း သူ့ဖြတ်သန်းမှုကိုပင် ပြောပြလေ့မရှိ .. အကြောင်း တိုက်ဆိုင်မှ အကြိမ်ကြိမ်မေးမှသာ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်ဖြင့် ပြောပြလေ့ရှိသည်။ ပသို့ဆိုစေ.. ရဲဘော်တွေက သူ့ကိုတန်ဘိုးထားသည်၊ သူ့ဖြတ်သန်းမှုကို လေးလေးနက်နက် လေ့လာချင်သည်၊ သူ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုကို မှတ်တမ်းတခုအဖြစ် ရေးဖို့လည်း အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။
ဤ သို့ဖြင့် “အရုဏ်ဦးခရီးသည်” (ရဲဘော်ငွေ၏ ဘဝမှတ်တမ်း) ကို ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်ကြားမှ သူ… ကြိုးစားရေးခဲ့သည်။ “အရုဏ်ဦးခရီးသည်” တွင်… တော်လှန်ရေး အမျိုးသမီးရဲဘော်တယောက်၏ ကြံ့ခိုင်ပြတ်သားသော ရပ်တည်မှု၊ သူမတူသော ဇွဲသတ္တိတို့ဖြင့် တော်လှန်ရေးခရီးကြမ်းကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်သည်။
ထိုမျှမက..သူဖြတ်သန်းခဲ့သော ကာလအလိုက် ပါတီ…တော်လှန်ရေး…နှင့် လူထုလူတန်းစားများ၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကိုလည်း တစိတ်တပိုင်း လေ့လာသိရှိ သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ရဲဘော်ငွေ၏ “အရုဏ်ဦးခရီးသည်” စာအုပ်သည် ပါတီ၏ သမိုင်းပုံရိပ်တချို့ကို ထင်ဟပ်ပြသော ရာသက်ပန် တော်လှန်ရေး သမား တယောက်၏ နှလုံးသားဖြင့်ရေးဖွဲ့ထားသည့် သမိုင်းတန်ဘိုး တစုံတရာရှိသော မှတ်တမ်းတခုဟု ဆိုရမည်ပင်….။
ခ န္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကြည့်မည်ဆိုပါက ယုံနိုင်စရာမရှိ…ပါးပါးလျှပ်လျှပ် သေးသေးသွယ်သွယ် အမျိုးသမီးတယောက် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးထဲမှာ…အနှစ်(၄၀)ကျော်.. ဘယ်လိုသတ္တိ…အင်အားတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တာပါလိမ့်..? တောထဲတောင်ထဲ..မိုးရေထဲမှာ တိုက်ပွဲထဲမှာ…အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ……အခက်အခဲမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဘို့ ဇွဲသတ္တိတွေ ….သူဘယ်ကရလာတာလဲ.? ကျွန်တော်က သူ့ ဖြတ်သန်းမှုကို လေ့လာတူးဆွကြည့်ရင်းဖြင့် ..ဤပုစ္ဆာ၏ အဖြေကို ရှာထုတ်ရင်း..ဦးနှောက်လှုပ်ရှားနေမိသည်။
သူ၏ ပြတ်သားသည့် သံဓိဌာန်နှင့် ခိုင်မာသည့်ရပ်တည်မှုတို့က မည်သည့်အခက်အခဲကိုမဆို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့သတ္တိကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သတ္တိဆိုသည်မှာ တကယ်တော့..စွန့်လွှတ်မှုပင် မဟုတ်ပါလား…? ဘဝတသက်တာလုံး နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်…မမှိတ်မသုန်…တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် စွန့်လွှတ် သွားခဲ့သော..သူ့လို ကွန်မြူနစ်အမျိုးသမီးကြီးမျိုး…. ယနေ့ကာလတွင် ရှားရှားပါးပါးတော့ ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။
၂၀၁၄- ခုနှစ် ..မတ်လ(၆)ရက်နေ့ …ဆောင်းနှောင်းနွေအကူးကာလမို့ ..နှင်းကြွင်းကလေးတွေက ဝေနေဆဲ….နံနက်ခင်း၏ နေရောင်ခြည်က ခြံထဲရှိ သစ်တော့ပင်အကိုင်းအခက်များကြားမှ မှိန်ပျပျကလေး ဖြာကျနေသည်။ ရောင်စုံနှင်းဆီပွင့်ကလေးတွေကတော့ နှင်းရည်ဥကလေးများ တွဲခိုလျက် အရုဏ်ဦး၏အလှကို အားဖြည့်နေကြသည်။ နံနက်တိုင်း ဆင်းလာနေကျ အဖေါ်မဲ့နေသော ချိုးငှက်လေးတကောင်လည်း အိမ်ရှေ့တလင်းပြင်မှာ အစာရှာရင်း ပြေးလွှားကစားနေသည်။ အဝေးမှလာသော ရဲဘော်တယောက်ကတော့ ဤနေရာလေးကို “ကွန်မြူနစ် တောရကျောင်းလေး”ဟု တင်စားဖူးသည်။
ရဲ ဘော်ငွေ၏ ကျန်းမာရေးလည်း သိပ်မကောင်း၊ အိမ်နေရာလည်း မလွှဲသာမရှောင်သာ ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဟု သတင်းကြားသဖြင့် သတင်းမေး အားပေးရန် သူ့ခြံဝင်းသို့ ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံ ….အဆောတလျင် သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တွေ့တော့….ထုံးစံအတိုင်း သူက လှိုက်လှဲသောအပြုံးဖြင့် နှုတ်ဆက်ခရီးဦးကြိုပြုသည်။
“ ကိုငြိမ်းမောင်ရေ..လာလာ နှစ်ယောက် စလုံး လာကြတာကိုး….ရဲဘော်အောင်လွင်(သူ့ခင်ပွန်း) လည်း စောစောကပဲ အပြင်ထွက်သွားတယ်.. နေဖို့အိမ်သွားရှာမလို့တဲ့ ..ရွာဘက်ကို တက် သွားတယ်ထင်တယ် ”
မျက်နှာအနည်းငယ်ညှိုးနေသည်မှအပ သွက်သွက်လက်လက်လှုပ်ရှားနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် အနည်း ငယ် စိတ်သက်သာရာရမိသည်။
ထိုနေ့က…… ထူးထူးခြားခြား ခါတိုင်းနှင့်မတူ တွေ့သည်နှင့် စကားအဆက်မပြတ် ကရားရေလွှတ် တတွတ် တွတ် …သူက ချည်း ပြောနေသည်။ သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်ထဲမှ မှတ်မှတ်ရရ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်အချို့လည်းပါသည်။ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေလည်း ပါသည်။ ခရီးဝေး ထွက်စရာရှိသဖြင့် မှာစရာရှိတာတွေကိုတော့ မှာထားခဲ့အုံးမှ..ဆိုသည့် ပုံမျိုးပေါက်နေသည်။
“ ဖြစ်ချင်တော့ ကျမကိုမွေးပြီးတဲ့နောက် မကြာခင်မှာပဲ ကျမရဲ့အစ်မက ဆုံးသွားတယ်။ ကျမငယ်ငယ်က အငိုသန်လို့ဆိုပြီး အဖေနဲ့ အမေက အိမ်ပြင်မှာ တညလုံး ပစ်ထားတာမျိုးလည်း ခံရဘူးတယ်။ ကျမ မောင်လေး တနှစ်ခွဲအရွယ်လောက်မှာ အမေက ရောဂါနဲ့ ရုတ်တရက်ဆုံးတယ် .. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မောင်လေးလည်း အဲ့ဒီနေ့ ညနေမှာ ဆုံးပြန်ရော….အဖေကတော့ ကျမကြောင့် “ခိုက်” တာလို့ အယူသည်း ပြီး အညှိုးတကြီးနဲ့ ကျမကို တခြားလူကို ပေးပြစ်လိုက်တယ်။ ခွဲခါနီးမှာ နင့်မျက်နှာကို ငါ မကြည့်ချင်ဘူးဆိုပြီး မျက်နှာကို တံထွေးနဲ့ထွေးပြီး ထွက်သွားတော့တာပဲ…”
သူက အတိတ်ကို ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့တူးဆွနေပြန်သည်။ ယခင်က သူ့မှာ ဤအလေ့အထမျိုး မရှိပေ။ ကျွန်တော်တို့လည်း သူ့အမူ အရာ ခါတိုင်းနှင့်မတူ တမူထူးနေသည်ကို အကဲခပ်ရင်း သူ့စကားလုံးတွေထဲမှာ နစ်မျောနေသည်။ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နှင့်သာ ဆက်နားထောင် နေလိုက်သည်။ ဒုက္ခတွေနှင့်ချိုမြ ..သောကတွေနှင့်ယဉ်ပါး… ခဲ့ရသော လှိုင်းလုံးတွေကြားက မျောပါနေသည့် ဗေဒါပင်လေးကို မြင်ယောင် လာသည်။ ပသို့ဆိုစေ မဗေဒါကတော့ ပန်းပန်လျက် ဘဝရထား မိုင်တိုင်(၈၀)နားသို့ ချဉ်းကပ်လာပေပြီ။
“ (၈)ရက်နေ့မှာ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကလေးလုပ်ချင်တယ်။ ဟိုဘက်မြို့မှာ သွားစုကြရအောင်…ရှင်တို့လည်းလာ ဖြစ်အောင်လာကြနော်.. ဒီနှစ်ကတော့ လုပ်မှဖြစ်မှာ. . ”
တခုခုကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေကြောင်း သူမျက်နှာတွင်ပေါ်လွင်နေသည်။ အသံလှိုင်းတွေက တုန်ခါ ဝေဝါးနေပြီဖြစ်သော်လည်း. စကားလုံးတွေကတော့ တိကျပြတ်သား အားမာန်ပါဆဲပင်။
ခါတိုင်းလိုပင် လက်ဟန်ခြေဟန်ကလေးနှင့်ဖြစ်စေကာမူ…လက်ချောင်း လေးတွေကတော့ လေဖြတ်ထားသည့်ဒဏ်ကြောင့် ကောက်ကွေ့နေပြီဖြစ်သည်။ မရပ်မနား စကားဆက်တိုက်ပြောနေသဖြင့် အနည်းငယ် မောဟိုက်လာပုံရသည်။ သူ့ကို …ခဏအနားယူစေလိုသည့်သဘောဖြင့် ကျွန်တော်က ကြားဝင်ပြီး စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပြောလိုက်သည်။
“ ဆရာမကြီး ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် အခုအချိန်က ရာသီအပြောင်းအလဲ ဆိုတော့ သတိထားရမှာ…”
ကျွန်တော့်စကားအဆုံးမှာတော့ သူက တည်ကြည်လေးနက်သည့်အမူအရာနှင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စူးစူးစိုက် စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ နှင်းထုကိုဖြတ်၍ ထိုးဆင်းလာသော ဝါကျင်ကျင်နေရောင်ခြည်ပျပျလေးက သူ့မျက်နှာပေါ် ကျရောက်နေသည်။
“ ကျမ အသက်ဆက်ရှင်နေချင်သေးတယ်….
ကျမ မသေချင်သေးဘူး.. လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်… ”
ဗြုန်းခနဲ…ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် နိဒါန်းမပျိုး….ပြောလိုက်သောသူ့စကားကြောင့် အံ့အားသင့်သွားမိသည်။ အသက်( ၇၉နှစ် )အရွယ် အဖွားအို ရဲ့ရင်ထဲက လေးလေးနက်နက်ပွင့်ထွက်လာတဲ့ စကားလုံးတွေပါလား။
အပျိုဘော်ဝင်စ အရွယ်မှစပြီး အနှစ်(၆၀)ကျော် စွန့်လွှတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ ဘဝကိုအဓိပ္ဗာယ်ရှိစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီပဲ…..ဥက္ကဌမော် ပြောသလို.ကြီးမြတ်စွာရှင်သန်ခဲ့ပြီပဲ…တကယ်ဆိုလျှင်…အသက်အရွယ် ကျန်းမာရေး စသည့် ဘက်စုံရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်.. ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူသင့်ပေပြီ…။……သူ့စကားတခွန်းက ကျွန်တော့်အဘို့ အတွေးနက်လို့မဆုံးနိုင်တော့……ကျွန်တော့်ရင်ကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စူးစူးနစ်နစ် ထိမှန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အတွက် အလင်းတံခါးကို သူကတွန်းဖွင့်ပေးလိုက်ပြီလား……။
ပြည်သူတွေ မလွတ်မြောက်သေးဘူး မငြိမ်းချမ်းသေးဘူး ..သူ.ဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာလဲ…? ကွန်မြူနစ်တယောက်အဖို့ နောက်ဆုံး နှလုံးခုန်သံတချက်အထိ ဘဝကိုလေးနက်စွာ… အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ…..ရှင်သန်သွားရမည်ဆိုသည့် ရာသက်ပန်တော်လှန်ရေးသမားတယောက်၏ သံဓိဌာန်..သူ့မှာရှိပြီးဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလား…။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ဖျောင့်ဖျဖို့….စကားလုံးရှာမရနိုင်တော့ပါ။ ဤစကားလုံးများမှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် သူ၏ နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်စကားပင်ဖြစ်သည်ကို ထိုစဉ်က လုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့မိချေ………။
အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် ရဲဘော်ငွေက စိတ်လောနေပုံရသည်။ ရဲဘော်များနှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး နောက်နေ့ မတ်လ(၇)ရက်နေ့မှာပင် ရွှေလီမြို့သို့ ထွက်သွားခဲ့သည်ဟု သိလိုက်ရသည်။
ကျမ .. << တူတံစဉ်အလံအောက်ချီ >>သီချင်းကို ဆိုချင်တယ်။
ဆိုသောသူ့စကားသံကိုပြန်လည်ကြား ယောင်မိသည်။ ဤတော်လှန်ရေး အမျိုးသမီးသီချင်း၏ စာသားရော..သံစဉ်ကိုပါ သူက အတော်နှစ်သက်ပုံရသည်။
ရဲ ဘော်မတွေကတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ သဘောထားဖြင့်သာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ မတ်လ(၇)ရက်နေ့ ညနေမှာတော့ သူ့ကျန်းမာရေး ရုတ်တရက်ဖေါက်လာသဖြင့် မတတ်သာဘဲ ဆေးရုံတင်လိုက်ရသည်ဟု ကြားသိလိုက်ရသည်။ မတ်လ(၈)ရက်နေ့ နံနက်(၁)နာရီမှာတော့ ဆေးရုံပေါ်မှာ သူကွယ်လွန်သွားပြီဆိုသော သတင်းကို မမျှော်လင့်ဘဲ ကြားလိုက်ရတော့သည်။ ရုတ်တရက်မို့ ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်နာကျင် ကြေကွဲသွားမိပါသည်။
ဆိုသော ရဲဘော်ငွေကို သဘာဝမိခင်ကြီးက ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှ အပြီးအပိုင်ဆွဲခေါ်သွားပါပကောလား.. ။ ကျန်ရစ်သော ကျွန်တော်တို့အဖို့ ကတော့ ကြွေလွင့်သွားသောကြယ်တပွင့်အတွက် နှမျောတသ လွမ်းပြီးရင်း လွမ်းနေရအုံးမည်ပင်..။
“ ချစ်လှစွာသော ရဲဘော်ငွေရေ…. ဘဝတသက်တာလုံး စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီပဲ…ကျေနပ်ပါတော့။ ပြည်သူတရပ်လုံး ဘဝလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးနည်းနည်းမှမဖက်ဘဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ သင့်ရဲ့ စွန့်လွှတ်မှု..သတ္တိနဲ့ လုပ်ဟန်တွေဟာ ဗမာပြည်က အမျိုးသမီးများအတွက် စံနမူနာတရပ်အဖြစ်၊ မှတ်တိုင်တခုအဖြစ် …မားမားမတ်မတ် ထာဝရ တည်ရှိနေမှာပါ။ သင့်ရဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို လက်ဆင့်ကမ်းထမ်း ဆောင်ကြမှာပါ….။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူပါတော့ ရဲဘော်ရေ….”
ဈာ ပနမှာ ….သူမြတ်နိုးသော နှင်းဆီပန်းတွေ အပြိုင်းအရိုင်း ဝေဆာနေသည်…..။ ရဲဘော်မတွေက သူ သီဆိုချင်ပါသည်ဆိုသော << တူတံစဉ်အလံအောက်ချီ>> အမျိုးသမီးတော်လှန်ရေးတေးသီချင်းကို သံပြိုင် သီဆိုပြီး သူ့ကိုဂါရဝပြုကြသည်..။ သူတို့အားလုံး၏ ရင်ထဲမှ စူးနစ်နာကျင်မှုကြောင့် အသံလှိုင်းတွေကတော့ ကြေကွဲတုန်ခါနေပါသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အင်တာနေရှင်နယ်(နိုင်ငံတကာသီချင်း) ဖြင့် ဂုဏ်ပြု..ဦးညွှတ်နှုတ်ဆက်ကြသည်………။
“ ဆရာမကြီးရေ…စိတ်ချ လက်ချအနားယူပါတော့၊
ဆရာမကြီးရဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဘို့.. ကျမတို့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင် သွားကြမှာပါ …………”
ဗြုန်းခနဲ… ရဲဘော်မတယောက်၏ ရှိုက်ကြီးတငင်အော်ဟစ်ငိုကြွေးလိုက်သံကို ကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးအိမ်မှ မျက်ရည်ဥတို့ လိမ့်ဆင်းလာပါတော့သည်။